We.com.mm - သင့်ကြောင်လေးက သင့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ သိနိုင်သလဲ
ကြောင်ချစ်သူတို့ သိတဲ့အတိုင်း ကြောင်လေးတွေရဲ့ စိတ်ကိုဖတ်ရတာ ခွေးလေးတွေလောက် မလွယ်ပါဘူး။ အချို့ကြောင်လေးတွေက သခင်ကို ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့နေတတ်ပေမယ့် ကြောင်အများစုက သူတို့စိတ်လိုလက်ရရှိမှ သခင်နား ကပ်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် ကြောင်တွေက ခွေးတွေလောက် သခင်ကိုမခင်တွယ်ဘူး၊ မချစ်ဘူးလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြောင်လေးတွေကလည်း သခင်ကို ချစ်တတ်ပါတယ်။ ချစ်ပုံချစ်နည်းပဲ မတူတာပါ။ သူတို့ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ချစ်တာကို ပြသပါသလဲ?
ခေါင်းနဲ့ဝှေ့တယ်၊ ခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်ဆိုတာ ကြောင်လေးတွေက သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို ပြသတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ ကြောင်လေးတွေဟာ သူတို့ချစ်ခင်တဲ့သူတွေကို ဦးခေါင်းလေးနဲ့လိုက်ဝှေ့လေ့ ရှိပါတယ်။ အရာတစ်ခုခုကို သူတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာ အမှတ်အသားလုပ်ချင်တဲ့အခါလည်း ခေါင်းနဲ့ဝှေ့တတ်ပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေရဲ့ မေ့စေ့၊ ဦးခေါင်း၊ ပါးနဲ့ နှုတ်ခမ်းမှာ အာရုံခံအကျိတ်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာတွေနဲ့ သင့်ကိုတိုးဝှေ့တယ်ဆိုရင် သင်က သူ့အပိုင်ပဲ ဆိုပြီး အမှတ်အသားပြုလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂) ခြေထောက်နားကို အမြီးနဲ့ရစ်ပတ်တယ်
ကြောင်တွေရဲ့အမြီးက သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို အများကြီး ပြသပါတယ်။ အမြီးရဲ့ အမွှေးတွေ ဖွာနေတာ၊ ထောင်နေတာ၊ အမြီးက ခုံးထနေတာမျိုးဆိုရင် သူကြောက်နေတာပါ။ အမြီးက ဟိုယမ်းဒီယမ်းလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သူပျော်နေတယ်၊ ကျေနပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ သင့်ရဲ့လက်(သို့) ခြေထောက်ကို သူတို့ရဲ့အမြီးနဲ့ လာရစ်ပတ်တယ်ဆိုရင် သူသင့်ကို ချစ်ခင်တယ်ဆိုတာကို ပြသတာပါ။
ကြောင်လေးတွေရဲ့ဗိုက်က ကစားလို့အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာ ကြောင်ချစ်သူတိုင်း သိကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကြောင်တော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ဝမ်းဗိုက်ကို ပွတ်ပြီးဆော့ကစားတာ မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့စိတ်ချယုံကြည်လို့ရတဲ့သူကိုပဲ သူတို့ဗိုက်လေးတွေ လှန်ပေးတတ်ပါတယ်။ ကြောင်လေးဟာ သင့်နားမှာလာလှဲပြီး ဝမ်းဗိုက်လေးလှန်ပေးထားတယ်ဆိုရင် သူသင့်နားမှာနေရတာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တယ်၊ သင့်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
ကြားဖူးကြမှာပါ။ ကြောင်လေးတွေဆီက “ဂရူးဂရူး” ဆိုပြီး အသက်ရှူသံတစ်မျိုးထွက်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ သင်အနားမှာ ရှိနေတဲ့အချိန် ကြောင်လေးဆီက အဲလိုအသံမျိုးထွက်လာရင် သင်သူ့အနားမှာ ရှိတာကို သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
ကြောင်လေးတွေဟာ လက်ဆောင်အနေနဲ့ ကြွက်၊ ဖား၊ ပိုးကောင်နဲ့ အမှိုက်စတွေကို ယူလာတတ်ပါတယ်။ လူအများစုက ဒီလက်ဆောင်တွေက သခင်အတွက်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်အတွက်ယူလာပေးတာပါ။ သူတို့ရဲ့အိမ်လို့သတ်မှတ်တဲ့နေရာကိုပဲ အဲလိုလက်ဆောင်တွေ ယူလာတတ်တာပါ။ ဒီလိုယူလာတာဟာ သင့်ရဲ့အိမ်ကို သူ့အတွက် လုံခြုံတဲ့ နေရာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ပါ။
ကြောင်လေးတွေဟာ သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေကို မနာအောင် သာသာလေးကိုက်ဝါးတာမျိုးတွေ လုပ်တတ်ပါတယ်။ စိတ်တိုလို့ကိုက်တာလား၊ ချစ်လို့ကိုက်တာလားဆိုတာတော့ ကွာပါတယ်။ ချစ်လို့ကိုက်တာက ပေါက်အောင်မကိုက်သလို နာလည်းမနာပါဘူး။ မတော်တဆခြစ်မိတာမျိုးတော့ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်နာနေတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်ရင် သူဆက်မကိုက်တော့ပါဘူး။
သင့်ကြောင်လေးက သင့်အိပ်ယာနားလာအိပ်တယ်၊ ရေချိုးခန်းဝင်ရင်လိုက်ဝင်တယ်၊ ထမင်းစားရင် လာထိုင်ကြည့်တယ်ဆိုရင် သူသင့်ကို တော်တော်လေး ချစ်လို့ပါ။ ဗိုက်ဆာလို့မဟုတ်ဘဲ သင့်နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး သင်ရှိတဲ့နေရာမှာ လိုက်နေတယ်ဆိုတာ သင့်ကိုခင်တွယ်လို့ပါ။
တိရိစ္ဆာန်တော်တော်များများက သူတို့သဘောကျနှစ်သက်တဲ့သူကို လျှာနဲ့လျက်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာ ကြောင်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကြောင်လေးက သခင်ကို လျှာနဲ့လျက်တယ်ဆိုတာ သခင်ကိုယုံကြည်တယ်၊ သခင်ကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။
ကြောင်လေးတွေဟာ သူတို့အိပ်မယ့်နေရာလေး ဇိမ်ကျကျဖြစ်အောင် လက်လေးတွေနဲ့ ကုတ်ဖွနှိပ်နယ်တတ်သလို သူတို့ချစ်တဲ့သူကိုလည်း နှိပ်နယ်ပေးတတ်ပါတယ်။ အဲလိုနှိပ်တာဟာ သင်အညောင်းပြေအောင် နှိပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူသင့်နားမှာနေရတာ သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်၊ စိတ်အပမ်းပြေတယ်၊ သဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ကြောင်လေးတွေက သူတို့ရဲ့အုပ်ထိန်းသူလို့ သတ်မှတ်တဲ့သူကိုပဲ အဲလိုလုပ်ပေးတာပါ။ အာရုံခံအကျိတ်လေးတွေဟာ ကြောင်ရဲ့လက်ဖဝါးလေးတွေမှာလည်းရှိတာကြောင့် သခင်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့ နှိပ်နယ်တာလို့ပြောရင်လည်း ရပါတယ်။
၁၀) ဖြည်းဖြည်းချင်း မျက်စိမှိတ်ပြတယ်
ဖြည်းဖြည်းချင်း မျက်စိမှိတ်ပြတယ်ဆိုတာ ကြောင်လေးတွေက သူတို့ရဲ့သန့်စင်တဲ့ အချစ်ကို ပြသနည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ဒါကို (Kitty Kiss) ကြောင်လေးရဲ့အနမ်းလို့တောင် တင်စားကြပါတယ်။ သင့်ကိုကြည့်ပြီး မျက်လုံးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ခဏခဏမှိတ်ပြနေတယ်ဆိုတာ သူအိပ်ချင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူသင့်ကိုချစ်တယ်လို့တဖွဖွ ပြောနေတာပါ။
အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်လေး၊ ခွေးလေးတွေအဝလွန်နေတာကို ဘယ်လိုလျှော့ချနိုင်မလဲ ?
ရုပ်ဆိုးသလောက် စားကောင်းပြီးအရသာအရမ်းရှိတဲ့ခရု ( ၅ ) မျိုး
မှားယွင်းပြီးလုပ်မိနေတဲ့ အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေက…
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာလုံခြုံမှုအတွက် သင့် Facebook ပေါ်မှ ဖျက်ပစ်သင့်တဲ့အချက်အလက် ( ၁၂ ) ခု
သင့်နေတိုင်းလွယ်နေရတဲ့ အိတ်ကိုပေါ့ပါးနေစေဖို့ ဒါတွေလိုက်လုပ်ကြည့်ပါနော်…
ဗစ်တိုးရီးယားစီးကရက် ဖက်ရှင်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး လိင်ပြောင်းမော်ဒယ်လ် ဖြစ်လာသူ
သင့်အိမ်မှာ သင်အမြဲရှုပ်အောင်ထားတတ်တဲ့ နေရာက ပြောတဲ့ သင့်စိတ်အခြေအနေ
ဆရာဂျွန်လွင် ဘက်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ရွှေမှုံရဲ့မိခင်ကို အမှန်အကန်ချေပတော့မလား ?